hay'adda Socdaalka Maraykanka Oo Qabsatay Mo Farah-
Portland,(lasanod Online)- Ordaaga kasoo jeeda Soomaaliya ee MO Farah, balse haysta dhalashada dalka Ingiriiska ayaa waji-gabax kala kulmay..
saraakiisha Socdaalka Maraykanka oo ku tuhmay inuu yahay Argagaxiso.
Mo Farah oo 2 biladood oo dahab ah ku guuleystay Ciyaarihii Olymbiga ayaa lagu qabtay Airporka magaalada Portland ee gobalka Oregon ee dalka Maraykanka.
Saraakiisha Socdaalka Maraykanka ayaa muddo saacado ah Airporka ku haystay MO Farah iyo reerkiisa, iyagoo sheegay inay baaritaan ku sameenayaan inuu yahay Argagaxiso iyo in kale, arrintan oo uu si weyn uga carooday Mo Farah. Sida ay qortay jariirada Daily Mail ee dalka Ingiriiska.
Arrintan qabsatay Mo Farah ayay hore usoo mareen kumanaan Soomaali ah oo dhibaato badan ka qabsata Airporada dalka Maraykanka xiliga ay dhoofayaan, ayadoo il gaar ah lagu hayo dadka Soomaalida ah tan iyo intii ururka Al Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya lagu daray liiska ururada uu Maraykanka u aqoonsan yahay Argagaxisada.